Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo Saxafada la hadlay ka dibna u socdaalay Gobolada Barri
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo Saxafada la hadlay ka dibna u socdaalay Gobolada...
Waxaan leeyahay anagu waanu diyaarinay wax kastaoo ay doorashooyinku u baahnaayeen, haday tahay dhaqaale, Xeerar, Komishinkii maamulayey, dhamaan waanaga diyaar, waxa keliya ee hadhsani waa Xeerka golaha wakiilada oo laga sugayo Gudoomiyaha golaha wakiilada. Wax kasta oo khuseeya maamulida arimaha doorashooyinka waxaa iska leh Komishinka doorashooyinka waana ku ixtiraamaynaa, waanaka sugaynaa ee dhamaanteenaan la shaqayno marka ay diyaariyaana qofkii danaynayaa ha u soo diyaar garowbo garoonka doorashada.
Dawladaydu waa sharci, way jirtaa waanay, jiri doontaa waxaana xil ka igala wareegi doona dawlad lasoo doortay oo sharci ku timaada. Dalkana masuuliyadiisu anagayna saran tahay, Cid kasta oo sharciga gudub marta oo iska indhatirtaa waxaanu kaqaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqib keeda.
Somaliland: Qaxoontigii Ugu Horeeyay Oo Hadda Soo Gaadhay Wajaale + Muuqaal